Lufthansa, SWISS neAustria Airlines vanomisa ndege kuenda kuchamhembe kweChina
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Lufthansa, SWISS neAustria Airlines vanomisa ndege kuenda kuchamhembe kweChina
Airlines • nhandare yendege • Austria Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • Germany Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • Switzerland Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Lufthansa Boka rinomisa nendege kuenda kumaodzanyemba China
Kuchengetedzwa kwevatakuri nevashandi chinhu chakanyanya kukoshesa Boka reLufthansa. Mushure mekuongorora zvakakwana ruzivo rwese rwuripo parizvino nezvehutachiona hwekorona, Lufthansa Group rakafunga kumisa nendege dzayo dzeLufthansa, SWISS neAustria Airlines kuenda / kubva kuBeijing nekuShanghai kusvika Kukadzi 28 nekukasira kushanda. Pakutanga ndege idzi dzange dzakamiswa kusvika Kukadzi 9. Nanjing, Shenyang neQingdao havasi kuzopihwa kusvika kupera kwemwaka wechando munaKurume 28. Kuenda kwendege kuenda / kubva kuHong Kong kunoenderera sekurongwa. Lufthansa Group ichaenderera mberi ichitarisa mamiriro ehutachiona hwekorona uye iri kusangana nevakuru vane basa.
The Lufthansa Boka inopa huwandu hwese makumi mashanu neshanu ekubatana kwevhiki nevhiki kubva kuGerman, Switzerland neAustria kuenda kuChinese mainland. Nzvimbo dziri Nangjing, Beijing, Shanghai, Shenyang uye Qingdao. Zvakare, ndege dzeLufthansa Group dzinopa 54 kubatana kwevhiki nevhiki kuHong Kong.